Wasiirkii maaliyadda ee Austria oo xabsiga loo taxaabay |
Wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Austria ayaa lagu xukumay sideed sano oo xarig ah, kadib markii lagu helay in uu ku lug lahaa musuq ay ku kaceen shakhsiyaad sarsare.
Karl-Heinz Grasser oo la xukumay maalin kahor ayaa lagu helay wax isdaba marin iyo in uu qaatay lacag laluush ah, si uu u iibiyo kumanaan guryo ah. Maxkamad ku taala Viena ayaa sheegtay in wasiirkii hore ee maaliyadda uu laaluush ahana u helay lacag dhan 9 milyan oo Gini. Haseyeeshee waxaa uu wasiirka beeniyay in uu wax dembi ah galay.
Grasser ayaa inta la ogyahay taariikhda waxaa uu noqday wasiirkii ugu da’da yaraa ee soo mara dalkaas, wuxuuna xilka wasaaradda maaliyadda ee Austria qabtay sanadkii 2000. Kiiskan ayaa waxaa sidoo kale ku lug lahaa 14 eedeysanayaal, kuwaas oo ku eedeysnaa xatooyo iyo musuqmaasuq.
Maxkamadda waxaa kale oo ay sheegtay in Grasser uu xog la xiriirta iibinta guryo dowladda ay laheyd balse la doonayay in si gaar ah loo yeesho uu u gudbiyay shirkad tartan ugu jirtay, taas oo la sheegay inay aheyd eexasho.
Shirkad ayaa guryahaas oo gaaraya 60 kun ku iibsatay lacag dhan sideed boqol oo milyan oo doollar balse saddex sano kadib waxaa guryahaas lagu qiimeeyay intaas laba jibaarkeed.
Sida ay sheegtay maxkamadda, dadka ku guuleystay qandaraaska guryahaas waxaa ay bixiyeen lacag dhan hal boqolkiiba oo ah 9 milyan oo Gini, oo ay siiyeen wasiirkii maaliyadda iyo nin kale oo arrimahaas kala shaqeynayay.
Lacagahan ayay maxkamadda markii dambe sheegtay inay caddaatay in lagu kala shubay saddex akoon oo bangi, waxaana ay maxkamadda xukuntay wasiirka iyo ninka kale.
Maxkamadda ayaa inta aanay go’aanka ku dhawaaqin waxay sheegtay in go’aankeeda lagu saleeyay markhaatiyaal dhan boqolaal. Sidoo kale wakaaladda wararka ee AFP ayaa kusoo warrantay in sidoo kale caddeymaha lasoo bandhigay ay qeyb ka tahay taleefoon la dhageystay.
Garsoore Marion Hohenecker ayaa sheegay in kuwa ku hawlan ganacsiga xalaasha ah aanay akoono qarsoodi ah sameysanin.
Waxaa kale oo ay garsooraha maxkamaddu sheegtay in shirkadda ku guuleysatay qandaraaska ay sameysay laaluush bixin, wasiirkii maaliyaddana uu u fududeeyay.
Qareenka Grassers ayaa go’aanka maxkamadda ku tilmaamay “mid khaldan”,waxayna intaa raaciyeen in ay racfaan ka qaadan doonaan.